အုန်းပင်ပေါ်က မျောက်အသည်းနှလုံး https://www.facebook.co m/ohn.m.oo | Development Global
AudioFundingFunding ResourcesSynergy GrantsScholarshipsVideoWeb Links
အုန်းပင်ပေါ်က မျောက်အသည်းနှလုံး https://www.facebook.co m/ohn.m.oo
♦ Leaveacomment	Back to Album · Ohn’s Photos · Ohn’s Timeline
… မိကျောင်းဖိုကတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ငြင်းတယ်။
မိန်းမအလိုဖြည့်ချင်တဲ့ မိကျောင်း လွယ်လွယ်နဲ့ ဘယ်လက်လျှော့မလဲ။ နေ့တိုင်းလိုလို မြှူဆွယ်ပြောဆိုနေတော့တာပေါ့။
အုန်းသီးတစ်လုံးခူးပြီး…. “ဗျို့ ကိုမိကျောင်း၊ ခင်ဗျားမိန်းမအတွက် ကျုပ်ရဲ့နှလုံးသားကို အုန်းသီးထဲမှာ ထည့်ထားတယ်။ ခွဲပြီး ကျွေးလိုက်ပေတော့ဗျို့” ဆိုပြီး မိကျောင်းခေါင်းတည့်တည့်ကိုချိန်ပြီး ပစ်ထည့်လိုက်တယ်။
ငါ့ခေါင်းကိုဖုအောင်ထုလိုက်တဲ့ မျောက်နှလုံးသားက အတော် မာကျောပုံရတယ်။ အသည်းနှလုံးထည့်ထားတဲ့ အုန်းသီးတောင် ဒီလောက်မာကျောနေရင် အတွင်းက မျောက်နှလုံးသားက ကျောက်တုံးတွေလိုပဲ ဖြစ်နေမလား။ ငါ့မိန်းမ စားမှစားနိုင်ပါ့မလား ဆိုပြီး စဉ်းစားနေသတဲ့။
ကောင်းသန့်ရဲ့ ခေတ်သစ်ပုံပြင်စာအုပ်မှကောက်နှုတ်ဖော်ပြသည်………See More
Unlike · · Share ·5minutes ago
← UNSC: What is the Security Council? http://www.un.org/en/sc/about/	သမ္မတကြီး အမေရိကန် တက္ကသိုလ် မှာ မိန့်ခွန်းပြောရင် တက္ကသိုလ်တွေကို မြို့ပြင်ပြောင်းဖို့ အကြံတော့ မပေးလောက်ဘူး ထင်ပါရဲ့နော်…:) ))) →	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...
Recent Posts	kostantin winston sent youamessage